ရာဧကရာဇ်မင်း၏ ခုနှစ်ရက် သားသမီး ဟောစာတမ်း - TAWTHU
ရာဧကရာဇ်မင်း၏ ခုနှစ်ရက် သားသမီး ဟောစာတမ်း
by Taw Thu in ဗေဒင်ကဏ္ဍ
(21.10.2018) မှ (27.10.2018) ခုနှစ်ရက် သားသမီး ဟောစာတမ်း….
ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ လူသားပီပီ ကိုယ်လျှောက်ရမယ့် ခရီးရှည်ကြီးဟာ ကြမ်းမလား ၊ လန်းမလား စဉ်းစားကြည့်ကြမှာပါ ၊ (အပျက်) ကိုမှု စဉ်းစားသူ မရှိသလောက် နည်းမည် ထင်ပါသည် ။ တကယ်မှာ မနက်ဖြန် ရွှေထုပ်ကြီး ရမည်ဟူသော (အဖြစ်) တရားထက်…. မနက်ဖြန် (ငွေ) ကျပျောက်မည်ဆိုသော (အပျက်) တရားက ပို၍ အရေးကြီးကြောင်း…
(တနင်္ဂနွေ) သားသမီးများအတွက် အဟော…
အတိုက်အခံ ပြဿနာ မကင်းသည့် ငွေကြေးပိုင်း အကျိုးရှိ ကံကောင်းမှုများ တွေ့ကြုံလာမည် ။ အခွင့်အရေးကောင်းများ ပေါ်ပေါက်လာသော်လည်း ဝီရိယအားနည်းမှုကြောင့် လွဲချော်နေမည် ။ ဖြစ်လိုသည်က တစ်မျိုး ၊ ဖြစ်လာသည်က တစ်ဖုံ ကြုံရတတ်သည် ။
လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဘာပဲလုပ်လုပ် အောင်မြင်မှုကို ရပါလိမ့်မည် ။ ရေရှည် ဒုက္ခပေးနေကြသူများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည့် ပြဿနာများကို သတိထားနေပါ ။ ပြောစကား ဆိုစကား အရာမဝင် ဖြစ်နေတတ်၍ လူအများနှင့် ငြင်းခုံ ပြောဆိုခြင်းကို ဆင်ခြင်သင့်သည် ။
ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးကံခေမှု များပြား၍ စိတ်ဖိစီးမှု မကြာခဏ တွေ့ကြုံတတ်သည် ။ ပြဿနာရှာသည့် ချစ်သူအပေါ် အလျှော့ပေး အနစ်နာခံ နေရတတ်သည် ။ အိမ်ထောင်ရှင်များ မိသားစု အေးချမ်းအောင် နေပါ ။ စကားများတာ ၊ ရန်ဖြစ်တာ ၊ ဆူပူတာဖြစ်လျှင် လာဘ်ပိတ်တတ်သည် ။
ယတြာ ။ ။ လူသွားလမ်း ၊ ဓမ္မာရုံ ရင်ပြင်တော်များတွင် တံမြက်စည်းလှည်းပါ ။
(တနလာင်္) သားသမီးများအတွက် အဟော…
မိမိ လုပ်ကိုင်နေရသည့် အလုပ်သည် မိမိတွင် ပညာခန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသဖြင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်နေပေလိမ့်မည် ။ ပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခု ရင်ဆိုင်ရမည် ။ ယခုအတောအတွင်း စိတ်မရှင်းသည်ကိစ္စ ဝေခွဲဆုံဖြတ်ရန် ခက်သည့်ကိစ္စတစ်ခု ကြုံရတတ်သည် ။
မဟုတ်သတင်း ၊ မမှန်သတင်း အလွှင့်ခံရတတ်သည် ။ အနီးကပ်ရန်ရှိသည် ။ ဝန်ထမ်းများ နယ်ဝေးရပ်ခြားသို့ ပြောင်းရွေ့ခံရတတ်သည် ။ အကြီးအကဲ မိသားစုအသိုင်းအဝန်းဖြင့် နားလည်းမှု လွဲချော်နေမည် ။
ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးမှာ တကျက်ကျက် ရန်ဖြစ်နေရ တတ်သည် ။ သဘောထားပြောင်းသည့် ချစ်သူကို သတိထားပါ ။ အိမ်ထောင်ရှင်များ သံသယ အတွေးများဖြင့် ပြဿနာရှာ ခံရတတ်သည် ။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အလစ်မပေး ၊ သံသယနှင့် စောင့်ကြည့်နေမည် ။
ယတြာ ။ ။ ဘုရားတစ်ဆူကို သွားပြီး ပန်းအနွမ်းတွေ ပန်းခြောက်တွေ ၊ ဖယောင်းတိုင် ထွန်းထားတဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေ ရှင်းလင်းပါ ။
(အင်္ဂါ) သားသမီးများအတွက် အဟော…
ရုတ်တရက် မထင်မှတ်သည့် အခွင့်အရေးကောင်း အခြေအနေကောင်းများ တွေ့ကြုံပေါ်ပေါက်လာပြီး ၊ မိမိ၏ ဂုဏ်သတင်း ထင်ပေါ် ကျော်စောမည် ။ လူအများ အာရုံမထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဆင်ခြေတုံးတရားဖြင့် စွန့်စားလှုပ်ရှားမှုတို့ အဆင်ပြေလိမ့်မည် ။
လျှပ်တစ်ပြတ် ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည့် အကြံဥာဏ် ကောင်းများကြောင့် ငွေကြေးကံ အထူကောင်းမည် ။ လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် ခရီးဝေးများ သွားလာရပြီး အကျိုးရှိမည် ။ ခေါင်းအုံ ၊ ခေါင်းကိုက် ၊ ဇက်ကြောထိုးကလွဲလို့ ကျန်းမာရေး ကောင်းနေမည် ။
ငယ်ရွယ်သူများ အခက်အခဲများ ကျော်ဖြတ်ရန် ချစ်သူထံမှ အကူအညီကောင်းများ ရရှိမည် ။ ရင်ခုန်သံ စည်းချက် ထပ်တူညီစွာဖြင့် ရွှေရောင် အနာဂါတ်များ ကျော်ဖြတ်ခွင်ရရှိမည် ။
အိမ်ထောင်ရှင်များ အတိတ်ကိုလှန်ပြီး အနားဟောင်းကို မထိုးဆွမိအောင် သတိပြု၍ ရှောင်ပါ ။ မရှောင်နိုင်က မောင်နှင့်မယ် လမ်းခွဲရတတ်ပါသည် ။
ယတြာ ။ ။ ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများကို စာအုပ်နှင့် စာရေးကရိယာ လှူဒါန်းပါ ။
(ဗုဒ္ဓဟူး) သားသမီးများအတွက် အဟော…
ပစ်တိုင်းထောင်ကဲ့သို့ အမြဲတမ်း တည့်မတ် တည်ငြိမ်စွာ ထောင်နေပါလိမ့်မည် ။ အပြောကောင်းသူက မိမိစီးပွားရေး ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်မှုကို ရှေ့သို့ တွန်းပို့နိုင်သကဲသို့ ၊ နောက်သို့လည်း ပြန်ဆွဲနိုင်၏။
စာချုပ်စာတမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း ၊ ငွေကြေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း မကြာခဏ စကားအခြေအတင် ပြောနေရတတ်သည် ။ မိမိနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိသော ကိစ္စများတွင် ပါဝင် ကူညီပေးခြင်းကို ရှောင်ပါ ။ လောကဓံတရားတို့က သင့်ကို နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးနှင့် အားစမ်းနေပါလိမ့်မည် ။
ငယ်ရွယ်သူများ ချစ်သူအပေါ် ဗိုလ်ကျ အနိုင်ယူလိုစိတ်များနေမည် ။ ချစ်သူမရှိသေးသူများလည်း အချစ် လက်တည့် မစမ်းသင့်ပါ ။ အိမ်ခေထာင်ရှင်များ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်အပေါ် အမြင်မကြည်လင်မှုများ ရှိနေမှုကြောင့် ရန်တကျက်ကျက် ဖြစ်ရတတ်မည် ။
ယတြာ ။ ။ ခရီးသွားမည့် သူများကို အစာအဟာရလှူ၍ ဆုတောင်းပါ ။
(ကြာသပတေး) သားသမီးများအတွက် အဟော..
အဆင်မပြေမှုများကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များ ပေါက်ဖွားရှင်သန် လာတတ်သည် ။ လူမှုရေး အပျော်အပါး ကိစ္စများအတွက် ဂုဏ်သတင်း ညှိးနွမ်းရတတ်သည် ။ မိသားစုအတွင်း စိတ်ညစ်စရာများ တစ်ပူပေါ် တစ်ပူဆင့်ဖြစ်နေလိမ့်မည် ။
ရည်မှန်းချက် ၊ ရည်ရွယ်ချက် ကြီးမားလွန်းသော်လည်း လက်တွေ့မှာ အကောင်အထည် ဖော်ရန် အခက်အခဲတွေ့ရတတ်သည် ။ စမ်းတဝါးဝါး လျှောက်လှမ်းနေရလိမ့်မည် ။ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပြီးသည့်တိုင်အောင် အငြင်းအခုန်ဖြစ်မှုများကို သတိထားနေပါ ။
ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူက တောထဲက ကျားထက် ရက်စက်သူ ဖြစ်နေတတ်သည် ။ နားလည်းမှု လွဲချော်နေချိန် ဖြစ်ပြီး အမုန်းအရိပ်ဆိုး များကြား ခွဲခွာသွားရတတ်သည် ။ အိမ်ထောင်ရှင်များ ညှိနှိုင်းရန် ကြန့်ကြာမည် ၊ အိမ်ထောင်ရေး တိုက်ပွဲများ ဆင်နွှဲနေရမည် ။
ယတြာ ။ ။ ပိတောက်ညွန့် ဘုရားလှူပါ ။
(သောကြာ) သားသမီးများအတွက် အဟော…
လူလိမ်လူကောက်များ အမှတ်မထင် ရောက်လာတတ်သည် ။ သူတစ်ပါးအမှု အာမခံ မပြုသင့်ပါ ။ သူတစ်ပါးက အမှုဆင် အကွက်ဆင် နာမည်ဖျက် တတ်သည် ။ မအူမလည် ပြဿနာများကို တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ကြုံရတတ်သည် ။
တစ်ခုထက်ပိုသော လုပ်ငန်းများကို လျှော့ချပါ ။ ငွေကြေး ပြန့်လွင့်နေပြီး ထိရောက်မှုမရှိ ဖြစ်နေမည် ။ လက်တွေ့နှင့် စိတ်ကူး ၊ မတူညီမှုများစွာ ကြုံရ ဆုံရတတ်သည် ။ ဆန္ဒနှင့် ဘဝ တစ်ထပ်တည်း ကျမနေတတ်ပေ ။ တေ့လွဲများ မကြာခဏ ကြုံရတတ်သည် ။
ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးကိစ္စမှာ အမြင်ကျယ်ကျယ်ဖြင့် စင်စင်ကြယ်ကြယ် ချစ်ခွင့် ကြုံရတတ်သည် ။ လှပလွန်းသော အချစ်အိပ်မက်ကလေး တစ်ခုကို မြှားနတ်မောင်က ဖန်ဆင်းပေးပါလိမ့်မည် ။
အိမ်ထောင်ရှင်များ မိဘဆွေမျိုးများ ကြားမှာ ကြိတ်မှိတ် သည်းခံနေရမည် ။ အစစ သူ့မျက်နှာကြည့်၍ လုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ဘဝကို မကျေမနပ် ဖြစ်နေမည် ။
ယတြာ ။ ။ ခရေညွန့် ဘုရားကပ်လှူပါ ။
(စနေ) သားသမီးများအတွက် အဟော…
စိတ်ကူးသစ်များ မွေးဖွားဖြစ်တည်၍ အနာဂတ် ဆန္ဒများဆီသို့ ခရီးဆက် ရွက်လွှင်ခွင့် ရရှိမည် ။ လေ့လာဆည်းပူထားသော အသိပညာ အတတ်ပညာ များကို အသုံးချခွင့် ရရှိပေလိမ့်မည် ။ ရပ်ဝေးမှ အဆက်အသွယ် သတင်းစကား ကောင်းများ ကြားရတတ်သည် ။
သွားရမည့် ခရီးတစ်ခုအတွက် တက်ကြွနေတတ်သည် ။ ပေါ့ပေါ့ဆဆတော့ မနေပါနှင့် မမှားတော့လည်း မမှားလို့ ၊ အမှား ပါလာပြီးဆိုရင်လည်း ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေတာမျိုး ကြုံရတတ်သည် ။
ငယ်ရွယ်သူများ မိမိချစ်သူ စည်းမထားမှု သစ္စာမဲ့မှုများအတွက် သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းက ရန်သူတွေ ဖြစ်သွားတတ်သည် ။ ဘဝဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေကြောင့် ချစ်ရမှာ ကြောက်နေသော်လည်း အားကိုးရမည့် သူကို တမ်းတနေမည် ။
အိမ်ထောင်ရှင်များ မိမိအိမ်တွင် ညဉ့်အိပ်ညဉ့်နေ ဧည့်သည်များကို လက်မခံသင့်ပါ ။ သူတစ်ပါး ပြဿနာ အိမ်ပေါ် ပါလာမည် ။ အပိုကုန်ငွေ များမည် ။
ယတြာ ။ ။ နေအိမ် ဘုရားကျောင်းဆောင် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါ ။ ဘုရား ရေသပ္ပာယ်ပါ ။
မိမိတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများကို ဖတ်ရှုစေချင်ရင် (like and share) လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပါ မျှဝေပေးကြပါ ခင်ဗျာ ။
သင်တို့၏ အကျိုးကို လိုလားသော…
🔯 ဆရာဧကရာဇ်မင်း 🔯
(တဲရော့ ၊ ဗေဒ ၊ လက္ခဏာ)
(21.10.2018) မှ (27.10.2018) ခုနှဈရကျ သားသမီး ဟောစာတမျး….
ပုထုဇဉျဖွဈတဲ့ လူသားပီပီ ကိုယျလြှောကျရမယျ့ ခရီးရှညျကွီးဟာ ကွမျးမလား ၊ လနျးမလား စဉျးစားကွညျ့ကွမှာပါ ၊ (အပကျြ) ကိုမှု စဉျးစားသူ မရှိသလောကျ နညျးမညျ ထငျပါသညျ ။ တကယျမှာ မနကျဖွနျ ရှထေုပျကွီး ရမညျဟူသော (အဖွဈ) တရားထကျ…. မနကျဖွနျ (ငှေ) ကပြောကျမညျဆိုသော (အပကျြ) တရားက ပို၍ အရေးကွီးကွောငျး…
(တနင်ျဂနှေ) သားသမီးမြားအတှကျ အဟော…
အတိုကျအခံ ပွဿနာ မကငျးသညျ့ ငှကွေေးပိုငျး အကြိုးရှိ ကံကောငျးမှုမြား တှကွေုံ့လာမညျ ။ အခှငျ့အရေးကောငျးမြား ပျေါပေါကျလာသျောလညျး ဝီရိယအားနညျးမှုကွောငျ့ လှဲခြျောနမေညျ ။ ဖွဈလိုသညျက တဈမြိုး ၊ ဖွဈလာသညျက တဈဖုံ ကွုံရတတျသညျ ။
လုပျငနျးခှငျတှငျ ဘာပဲလုပျလုပျ အောငျမွငျမှုကို ရပါလိမျ့မညျ ။ ရရှေညျ ဒုက်ခပေးနကွေသူမြားကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာတတျသညျ့ ပွဿနာမြားကို သတိထားနပေါ ။ ပွောစကား ဆိုစကား အရာမဝငျ ဖွဈနတေတျ၍ လူအမြားနှငျ့ ငွငျးခုံ ပွောဆိုခွငျးကို ဆငျခွငျသငျ့သညျ ။
ငယျရှယျသူမြား အခဈြရေးကံခမှေု မြားပွား၍ စိတျဖိစီးမှု မကွာခဏ တှကွေုံ့တတျသညျ ။ ပွဿနာရှာသညျ့ ခဈြသူအပျေါ အလြှော့ပေး အနဈနာခံ နရေတတျသညျ ။ အိမျထောငျရှငျမြား မိသားစု အေးခမျြးအောငျ နပေါ ။ စကားမြားတာ ၊ ရနျဖွဈတာ ၊ ဆူပူတာဖွဈလြှငျ လာဘျပိတျတတျသညျ ။
ယတွာ ။ ။ လူသှားလမျး ၊ ဓမ်မာရုံ ရငျပွငျတျောမြားတှငျ တံမွကျစညျးလှညျးပါ ။
(တနလာင်ျ) သားသမီးမြားအတှကျ အဟော…
မိမိ လုပျကိုငျနရေသညျ့ အလုပျသညျ မိမိတှငျ ပညာခနျးဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြမှု မရှိသဖွငျ့ ဝနျထုပျဝနျပိုး ဖွဈနပေလေိမျ့မညျ ။ ပွဿနာတဈခုပွီးတဈခု ရငျဆိုငျရမညျ ။ ယခုအတောအတှငျး စိတျမရှငျးသညျကိစ်စ ဝခှေဲဆုံဖွတျရနျ ခကျသညျ့ကိစ်စတဈခု ကွုံရတတျသညျ ။
မဟုတျသတငျး ၊ မမှနျသတငျး အလှငျ့ခံရတတျသညျ ။ အနီးကပျရနျရှိသညျ ။ ဝနျထမျးမြား နယျဝေးရပျခွားသို့ ပွောငျးရှခေံ့ရတတျသညျ ။ အကွီးအကဲ မိသားစုအသိုငျးအဝနျးဖွငျ့ နားလညျးမှု လှဲခြျောနမေညျ ။
ငယျရှယျသူမြား အခဈြရေးမှာ တကကျြကကျြ ရနျဖွဈနရေ တတျသညျ ။ သဘောထားပွောငျးသညျ့ ခဈြသူကို သတိထားပါ ။ အိမျထောငျရှငျမြား သံသယ အတှေးမြားဖွငျ့ ပွဿနာရှာ ခံရတတျသညျ ။ တဈယောကျနှငျ့ တဈယောကျ အလဈမပေး ၊ သံသယနှငျ့ စောငျ့ကွညျ့နမေညျ ။
ယတွာ ။ ။ ဘုရားတဈဆူကို သှားပွီး ပနျးအနှမျးတှေ ပနျးခွောကျတှေ ၊ ဖယောငျးတိုငျ ထှနျးထားတဲ့ အမှိုကျသရိုကျတှေ ရှငျးလငျးပါ ။
(အင်ျဂါ) သားသမီးမြားအတှကျ အဟော…
ရုတျတရကျ မထငျမှတျသညျ့ အခှငျ့အရေးကောငျး အခွအေနကေောငျးမြား တှကွေုံ့ပျေါပေါကျလာပွီး ၊ မိမိ၏ ဂုဏျသတငျး ထငျပျေါ ကြျောစောမညျ ။ လူအမြား အာရုံမထားသော စီးပှားရေးလုပျငနျးကို ဆငျခွတေုံးတရားဖွငျ့ စှနျ့စားလှုပျရှားမှုတို့ အဆငျပွလေိမျ့မညျ ။
လြှပျတဈပွတျ ပျေါပေါကျလာတတျသညျ့ အကွံဉာဏျ ကောငျးမြားကွောငျ့ ငှကွေေးကံ အထူကောငျးမညျ ။ လုပျငနျးကိစ်စမြားအတှကျ ခရီးဝေးမြား သှားလာရပွီး အကြိုးရှိမညျ ။ ခေါငျးအုံ ၊ ခေါငျးကိုကျ ၊ ဇကျကွောထိုးကလှဲလို့ ကနျြးမာရေး ကောငျးနမေညျ ။
ငယျရှယျသူမြား အခကျအခဲမြား ကြျောဖွတျရနျ ခဈြသူထံမှ အကူအညီကောငျးမြား ရရှိမညျ ။ ရငျခုနျသံ စညျးခကျြ ထပျတူညီစှာဖွငျ့ ရှရေောငျ အနာဂါတျမြား ကြျောဖွတျခှငျရရှိမညျ ။
အိမျထောငျရှငျမြား အတိတျကိုလှနျပွီး အနားဟောငျးကို မထိုးဆှမိအောငျ သတိပွု၍ ရှောငျပါ ။ မရှောငျနိုငျက မောငျနှငျ့မယျ လမျးခှဲရတတျပါသညျ ။
ယတွာ ။ ။ ကြောငျးသား ၊ ကြောငျးသူမြားကို စာအုပျနှငျ့ စာရေးကရိယာ လှူဒါနျးပါ ။
(ဗုဒ်ဓဟူး) သားသမီးမြားအတှကျ အဟော…
ပဈတိုငျးထောငျကဲ့သို့ အမွဲတမျး တညျ့မတျ တညျငွိမျစှာ ထောငျနပေါလိမျ့မညျ ။ အပွောကောငျးသူက မိမိစီးပှားရေး ရညျရှယျခကျြ အောငျမွငျမှုကို ရှသေို့ တှနျးပို့နိုငျသကဲသို့ ၊ နောကျသို့လညျး ပွနျဆှဲနိုငျ၏။
စာခြုပျစာတမျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ လညျးကောငျး ၊ ငှကွေေးကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ လညျးကောငျး မကွာခဏ စကားအခွအေတငျ ပွောနရေတတျသညျ ။ မိမိနှငျ့ သကျဆိုငျမှုမရှိသော ကိစ်စမြားတှငျ ပါဝငျ ကူညီပေးခွငျးကို ရှောငျပါ ။ လောကဓံတရားတို့က သငျ့ကို နညျးလမျး အမြိုးမြိုးနှငျ့ အားစမျးနပေါလိမျ့မညျ ။
ငယျရှယျသူမြား ခဈြသူအပျေါ ဗိုလျကြ အနိုငျယူလိုစိတျမြားနမေညျ ။ ခဈြသူမရှိသေးသူမြားလညျး အခဈြ လကျတညျ့ မစမျးသငျ့ပါ ။ အိမျခထောငျရှငျမြား မိမိအိမျထောငျဖကျအပျေါ အမွငျမကွညျလငျမှုမြား ရှိနမှေုကွောငျ့ ရနျတကကျြကကျြ ဖွဈရတတျမညျ ။
ယတွာ ။ ။ ခရီးသှားမညျ့ သူမြားကို အစာအဟာရလှူ၍ ဆုတောငျးပါ ။
(ကွာသပတေး) သားသမီးမြားအတှကျ အဟော..
အဆငျမပွမှေုမြားကွောငျ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဒဏျရာဒဏျခကျြမြား ပေါကျဖှားရှငျသနျ လာတတျသညျ ။ လူမှုရေး အပြျောအပါး ကိစ်စမြားအတှကျ ဂုဏျသတငျး ညှိးနှမျးရတတျသညျ ။ မိသားစုအတှငျး စိတျညဈစရာမြား တဈပူပျေါ တဈပူဆငျ့ဖွဈနလေိမျ့မညျ ။
ရညျမှနျးခကျြ ၊ ရညျရှယျခကျြ ကွီးမားလှနျးသျောလညျး လကျတှမှေ့ာ အကောငျအထညျ ဖျောရနျ အခကျအခဲတှရေ့တတျသညျ ။ စမျးတဝါးဝါး လြှောကျလှမျးနရေလိမျ့မညျ ။ ဖွဈပျေါလကျြရှိသညျ့ ပွဿနာမြားကို ဖွရှေငျးပွီးသညျ့တိုငျအောငျ အငွငျးအခုနျဖွဈမှုမြားကို သတိထားနပေါ ။
ငယျရှယျသူမြား အခဈြရေးမှာ ခဈြသူက တောထဲက ကြားထကျ ရကျစကျသူ ဖွဈနတေတျသညျ ။ နားလညျးမှု လှဲခြျောနခြေိနျ ဖွဈပွီး အမုနျးအရိပျဆိုး မြားကွား ခှဲခှာသှားရတတျသညျ ။ အိမျထောငျရှငျမြား ညှိနှိုငျးရနျ ကွနျ့ကွာမညျ ၊ အိမျထောငျရေး တိုကျပှဲမြား ဆငျနှဲနရေမညျ ။
ယတွာ ။ ။ ပိတောကျညှနျ့ ဘုရားလှူပါ ။
(သောကွာ) သားသမီးမြားအတှကျ အဟော…
လူလိမျလူကောကျမြား အမှတျမထငျ ရောကျလာတတျသညျ ။ သူတဈပါးအမှု အာမခံ မပွုသငျ့ပါ ။ သူတဈပါးက အမှုဆငျ အကှကျဆငျ နာမညျဖကျြ တတျသညျ ။ မအူမလညျ ပွဿနာမြားကို တဈခုမဟုတျ တဈခု ကွုံရတတျသညျ ။
တဈခုထကျပိုသော လုပျငနျးမြားကို လြှော့ခပြါ ။ ငှကွေေး ပွနျ့လှငျ့နပွေီး ထိရောကျမှုမရှိ ဖွဈနမေညျ ။ လကျတှနှေ့ငျ့ စိတျကူး ၊ မတူညီမှုမြားစှာ ကွုံရ ဆုံရတတျသညျ ။ ဆန်ဒနှငျ့ ဘဝ တဈထပျတညျး ကမြနတေတျပေ ။ တလှေဲ့မြား မကွာခဏ ကွုံရတတျသညျ ။
ငယျရှယျသူမြား အခဈြရေးကိစ်စမှာ အမွငျကယျြကယျြဖွငျ့ စငျစငျကွယျကွယျ ခဈြခှငျ့ ကွုံရတတျသညျ ။ လှပလှနျးသော အခဈြအိပျမကျကလေး တဈခုကို မွှားနတျမောငျက ဖနျဆငျးပေးပါလိမျ့မညျ ။
အိမျထောငျရှငျမြား မိဘဆှမြေိုးမြား ကွားမှာ ကွိတျမှိတျ သညျးခံနရေမညျ ။ အစစ သူ့မကျြနှာကွညျ့၍ လုပျကိုငျနရေသဖွငျ့ ဘဝကို မကမြေနပျ ဖွဈနမေညျ ။
ယတွာ ။ ။ ခရညှေနျ့ ဘုရားကပျလှူပါ ။
(စနေ) သားသမီးမြားအတှကျ အဟော…
စိတျကူးသဈမြား မှေးဖှားဖွဈတညျ၍ အနာဂတျ ဆန်ဒမြားဆီသို့ ခရီးဆကျ ရှကျလှငျခှငျ့ ရရှိမညျ ။ လလေ့ာဆညျးပူထားသော အသိပညာ အတတျပညာ မြားကို အသုံးခခြှငျ့ ရရှိပလေိမျ့မညျ ။ ရပျဝေးမှ အဆကျအသှယျ သတငျးစကား ကောငျးမြား ကွားရတတျသညျ ။
သှားရမညျ့ ခရီးတဈခုအတှကျ တကျကွှနတေတျသညျ ။ ပေါ့ပေါ့ဆဆတော့ မနပေါနှငျ့ မမှားတော့လညျး မမှားလို့ ၊ အမှား ပါလာပွီးဆိုရငျလညျး ဘာလုပျလုပျ အဆငျမပွတောမြိုး ကွုံရတတျသညျ ။
ငယျရှယျသူမြား မိမိခဈြသူ စညျးမထားမှု သစ်စာမဲ့မှုမြားအတှကျ သူငယျခငျြး အခငျြးခငျြးက ရနျသူတှေ ဖွဈသှားတတျသညျ ။ ဘဝဒဏျရာ ဒဏျခကျြတှကွေောငျ့ ခဈြရမှာ ကွောကျနသေျောလညျး အားကိုးရမညျ့ သူကို တမျးတနမေညျ ။
အိမျထောငျရှငျမြား မိမိအိမျတှငျ ညဉျ့အိပျညဉျ့နေ ဧညျ့သညျမြားကို လကျမခံသငျ့ပါ ။ သူတဈပါး ပွဿနာ အိမျပျေါ ပါလာမညျ ။ အပိုကုနျငှေ မြားမညျ ။
ယတွာ ။ ။ နအေိမျ ဘုရားကြောငျးဆောငျ သနျ့ရှငျးရေး လုပျပါ ။ ဘုရား ရသေပ်ပာယျပါ ။
မိမိတို့ရဲ့ မိတျဆှေ သူငယျခငျြးမြားကို ဖတျရှုစခေငျြရငျ (like and share) လုပျပေးခွငျးဖွငျ့ ကူညီပါ မြှဝပေေးကွပါ ခငျဗြာ ။
သငျတို့၏ အကြိုးကို လိုလားသော…
🔯 ဆရာဧကရာဇျမငျး 🔯
(တဲရော့ ၊ ဗဒေ ၊ လက်ခဏာ)
စနေသားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာဟောစာတမ်းနှင့် ယတြာများ…
၂၀၁၈ ဇူလိုင်လ ၂၇၊ ၂၈ ရက် ကောင်းကင်ဂြိုဟ် အနေအထားပေါ်မူတည်သည့် အဟောကိန်း.. အချိန်အကြာဆုံး လကြတ်ခြင်း
မသိလိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီနှစ် ၁၃၈၀ ( ၂၀၁၈ ) ထဲမှာ သတိထားရမယ့် အမည်တွဲများ
သင့် အနာဂါတ်ကို ပြောပြပေးမယ့် Tarot ဗေဒင်
ညောင်တုန်းမြို့နယ်တွင် ကျောင်းသားကို ဒဏ်ရာရအောင်ရိုက်သော ဆရာအား တရားစွဲ
ARCHIVES Select Month November 2018 (402) October 2018 (736) September 2018 (575) August 2018 (563) July 2018 (656) June 2018 (563) May 2018 (519) April 2018 (359) March 2018 (624) February 2018 (323) January 2018 (403) December 2017 (229) November 2017 (7) October 2017 (6)